कति जनालाई कसरी भोट हाल्ने ? – Himal FM 90.2 MHz
कति जनालाई कसरी भोट हाल्ने ?
स्थानीय समाचार adminhimal November 24, 2017
मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति नजिक आइरहेको छ । मंसिर १० र २१ गते हुने आम निर्वाचनपछि मुलुक पूर्ण व्यवहारिक रुपमै संघीय ढाँचामा जाँदैछ । यो निर्वाचनमा कसरी मतदान गर्ने त ?
यो पटकको निर्वाचनमा मतदाताले संघीय प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा सदस्य छान्न भोट खसाल्नु पर्ने हुन्छ । मतदाताले बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यका लागि मतदान गर्नुपर्छ । बहुमतीय प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यलाई मतदान गर्न छुट्टा छुट्टै रंगका दुई मतपत्र हुनेछन् । यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि रातो रंङको एउटै मतपत्रमा दलहरुको चुनाब चिन्हमा मतदान गर्नुपर्नेछ । माथिल्लो खण्डमा प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिक उम्मेद्धारका पक्षमा मत संकेत गर्नुपर्छ भने दोस्रो खण्डमा प्रदेश सभाका समानुपातिक उम्मेद्धारको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ ।
मत खसाल्ने बेलामा मतदाताले सबैभन्दा पहिले हरियो रंगको मतपत्र पाउनेछन् । हरियो मतपत्र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य चयनका लागि हो । मतपत्रमा भएमध्ये कुनै एउटा निर्वाचन चिन्हमा मात्र मतदाताले स्वस्तिक चिन्ह लगाउनु पर्नेछ ।
त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतले दोस्रो मतपत्र कालो रंगको दिनेछन् । यो मतपत्र बहुमतीय प्रणालीबाट प्रदेश सभा सदस्य चयन गर्नका लागि हुनेछ । यो मतपत्रमा भएका भएमध्ये एउटा निर्वाचन चिन्हमा मात्र मतदाताले स्वस्तिक चिन्ह लगाउनु पर्नेछ ।
अन्तिममा मतदाताले रातो रंगको मतपत्र पाउनेछन् । यो मतपत्र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा समानुपातिक प्रणाली निर्वाचित हुनेहरुका लागि हो । यसमा राजनीतिक दलको एउटा मात्र चुनाब चिन्हमा स्वस्तिक चिन्ह लगाउनु पर्नेछ ।
यदि मतसंकेत गर्दा वा स्वस्तिक छाप लगाउदा मतदान अधिकृतको दस्तखत नभएको मतपत्रबाट मतदान गरेमा, औंठा छाप लगाई वा तोकिएको छाप बाहेक अरु चिन्ह वा छाप लगाइ मत दिएमा, मतसंकेत चिन्ह नबुझिने गरि लतपतिएको वा च्यातिएमा, उम्मेद्धारको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा मत संकेत नगरी अन्यत्र मत संकेत गरेमा, एक भन्दा बढि निर्वाचन चिन्ह भएका कोठामा छुट्टाछुट्टै मत संकेत गरेमा, एक भन्दा बढि उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह भएको कोठामा मत संकेतको चिन्ह पर्नेगरी मत संकेत गरेमा, कुनै पनि उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा मत संकेत नगरेमा, निर्वाचन आयोगद्वारा तोकिएको मतपत्र बाहेक अन्य मतपत्रद्धारा मतदान गरेमा, मतपेटिका भन्दा बाहिर राखेमा र जाली मतपत्र वा आयोगले बदर हुने भनी तोकेको मतपत्र फेला परेमा मत बदुर हुनेछ ।
नयाँ संबिधानका अनुसार २७५ सदस्यीय हुने केन्द्रिय प्रतिनिधि सभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वा्चित हुनेछन् भने ११० जना समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट चयन हुनेछन् । ५५० सदस्यीय प्रदेश सभामा भने ३३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र २२० सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चयन हुनेछन् ।
तपाई हाम्रो अमुल्य मत सक्षम र ईमानदार नेता चुन्नमा प्रयोग गरौ ।